Isku Aadka Horyaalka Premier League Ee Xilli-ciyaareedka 2017/18 Oo La Shaaciyey | Berberatoday.com
Isku Aadka Horyaalka Premier League Ee Xilli-ciyaareedka 2017/18 Oo La Shaaciyey
Isku aadka xili ciyaareedka cusub ee 2017/18 ee horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa la shaaciyey, kaas oo si rasmi ah u bilaabmi doona bisha 8aad ee sannadkan.
Xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska ayaa shaaciyey dhamaan ciyaaraha ay yeelan doonaan 20-ka kooxood ee Premier League ka ciyaari doona xili ciyaareedka soo socda, kuwaas oo tirada ciyaarahoodu noqon doonaan 380 ciyaarood.
Kooxda horyaalka haysata ee Chelsea ayaa geeddida xili ciyaareedka soo waajahan ku bilaabi doonta ciyaarta bilowga oo 12-ka August ay la ciyaari doonto Burnley oo dirqi ku badbaadday xili ciyaareedkii hore, waxaana ay wiilasha tababare Conte ku dedaali doonnaan inay horyaalka difaacdaan.
Naadiga dhowaanta kasoo laabtay heerka labaad ee Newcastle United ayaa martigelin doona Tottenham oo kaalinta labaad ku dhamaysatay xili ciyaareedkii hore, halka Brighton oo heerka labaad ka timid ay soo dhoweyn doonto Manchester City kulanka koowaad.
Huddersfield oo ka mid ah kooxaha kasoo dallacay heerka labaad ee Championshipka ayaa booqan doonta Crystal Palace oo Sam Alardyce uu shimbir badbaadiye ah u noqday xili ciyaareedkii hore oo uu ka dallacsiiyey inay ka baxdo halistii ay ugu jirtay inay hoos ugu dhacdo heerka labaad.
Kulanka koowaad ee Tottenham ee garoonka Wembley oo ay ku ciyaari doonto maadaama dhisme ka socdo garoonkeedii White Hart Line, waxa uu noqon doonaa toddobaadka labaad maalin Sabti ah, halkaas oo ay isku haleeli doonaan Chelsea.
Ciyaaraha koowaad waxay dhici doonaan oo si rasmi ah uu horyaalku u bilaabmi doonaa 12 August 2017 oo ku beegan maalin Sabti ah.
Goorma ayuu dhamaan doonaa xili ciyaareedku?
Hal toddobaad ayuu ka hor dhamaan doonaa wakhtigii xili ciyaareedkii hore lasoo gebogabeeyey tartanka Premier League, sababtoo ah, waxa jiri doona badhtamaha sannadka 2018 koobka Adduunka, kaas oo khasab ka dhigaya in horyaallada wakhti hore la dhameeyo. Maalin Axad ah oo ku beegan 13 May 2018 ayay dhici doonaan ciyaaraha ugu dambeeya ee horyaalku, kaddibna waxay ciyaaryahannadu u safri doonaan waddamadooda si ay ugala qayb-galaan ciyaaraha Koobka Adduunka inta nasiibka u heshay inay ciyaaraan.
Koobka Adduunka ee laga cararayo, goorma ayuu bilaabmayaa?
Koobka adduunka ayaa bilaabmi doona 14 June, taas oo ah bil kaddib maalinta uu dhamaado horyaalka Premier League.